Arabia Saodita: Ny mariazin’i #Tabukgirl · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, Français, বাংলা, English
Sary mampatahotra nataon ilay artista Koesiana Mohammed Sharaf manameloka izay nahazo ilay zazavavin i Tabuk
Tsy sambany tsy akory no nahitantsika lehilahy mampanambady ny zanany vavy tsy mbola ampy taona amina lehilahy efa voky taona, indrindra fa any Arabia Saodita sy any Yemen. Nisongadina tao anatin'ny andro vitsivitsy tamin'ny alalan'ny valan-tserasera ny tantara mampahonenan'ny “Zazavavin'i Tabuk”. Ny lazain'ny fampahalalam-baovao dia 17 taona razazavavy, saingy ny hita any amin'ny valan-tserasera kosa dia manondro ny #Tabukgirl ho 14 taona. Tsy mainona izay taonany, fa raha tsy teo ny dadatoany dia efa nampanambadian'ny rainy tamina lehilahy 60 taona razazavavy. Nitory ny rahalahiny tany amin'ny fitsarana ihany koa ny dadatoany hampiatoana ny mariazy mandra-pivoaka ny didim-pitsarana, izay nanemotra izany ho aminy volana oktobra, araka ny tatitra.
Tao anatin'ny fientanam-pihetseham-po tao amin'ny Twitter, ny Saodiana manala fanadinana doktorà manana anaram-bositra Aimee Rash (@AimeeRash) no mitaky izao any amin'ny fireneny:
@AimeeRash: mila mametraka lalàna mampitsahatra ny ray aman-dreny na mpiahy hanery ny zanany vavy hanambady isika na mandrara ny fanambadiana ambanin'ny 18 taona.
Mitaky ny mitovy amin'izany ny mpianatra hanala PhD Maha Al-Zayer (@malzayer180) :
@malzayer180: Mila manolo-dalàna handraràna ny fanambadian'ny tsy ampy taona isika
Mpisera twitter Saodiana Aiman (aimn1984) moa dia mamely izay rehetra tsy manaja ny zon'ny vehivavy sy ny tsy ampy taona:
@aimn1984: Izay manilikilika ny vehivavy sy tsy manome ny anjara zony ary izay tsy miantsoantso hiaro ny fahazazana dia tsy olombelona, tsy ijerena fiaviam-pirenena na fivavahana izany.
Manameloka izay nahazo an'ilay zazavavin'i Tabuk i Dana Qaddoura (DanaQV) tamin'ny filazana fa:
@DanaQV: Miala tsiny aho fa raha izaho dia tsy hanome ny zanako amin'olona efa razokiny heveriko ho dadabeko an
Tsy eken'i Khalil Jubran (third_point) ny fampidirana ny adihevitra mankamin'ny faneken'ilay zazavavy ny mariazy na ny tsy filazany na inona na inona:
@third_point: Ny ankizy ankizy hatrany na manaiky na mandà ny mariazy. Ny mitranga dia heloka bevava mamotika ny mahaolona, ary ny ankolafy rehetra ahitana ny rainy, ny tompon'andraikitry ny mariazy, ny vavolombelona ary izay mangina di amandray anjara amin'ilay heloka bevava koa.
Ilay mpamaham-bolongana Saodiana Zaki Safar (@Zaki_Safar) dia manoratra fa maneho ny maha-fiaraha-monina anjakan-dehilahy ny fiaraha-monina Saodiana ao amin'ny tantaran'ilay zazavavin'i Tabuk ity:
@Zaki_Safar: Fanjakan'i Arabia Saodita: Ao amin'ilay natao hifandrindra amin'ny filam-pananahan'ny lehilahy ny fivavahana
Saodiana hafa, Amr Dulaimi, (@Amr_D) nilaza ny henatra mianjady aminy noho ity zava-mitranga ao amin'ny fireneny ity:
@Amr_D: Tantara foronina ve ny #TabukGirl? Taona #2011 isika izao! Menatra noho ny fananako pasipaoro mitovy amin'ilay mpanolana ankizy tsy vanona ity aho
Mpanao gazety Saodiana Abdullah Haydhah (@AbdullahHaydhah) no nisiokantsera ny vaovao sasantsasany momba ny tafatafa nifanaovana tamin'ny dadatoan'ilay zazavavy izay hivoaka tsy ho ela:
@AbdullahHaydhah: Tamin'ny tafatafa nataon'ny mpiara-miasa amiko Ghada Mohammed, izay hivoaka ao amin'ny gazety Elaph, nilaza ilay dadatoan'ny zazavavin'i Tabuk fa rahonan'ny rahalahiny raha toa ka ajanona ny mariazy.
Aroob Aloofi, (@AroobM) vehivavy mpisera twitter Saodiana hafa no nanoratra ny loiloiny amin'ity mariazy ity:
@AroobM: Mahatonga anao ho #pedophile ny fampanambadiana zaza tsy ampy taona. Ry alika lahy ireto mitady zazavavy kely fa tsy vady.